I-360-DEGREE YEVIDIYO KAHAMILTON 'YILINDE' - EBANZI
Ngena igumbi apho lenzeka khona kule ntsebenzo yevidiyo engama-360-degree yeHamilton's Linda It
Wonke umntu uthanda Hamilton ( Ngaphandle kokuba kuboniswe ngokuchasene nayo kwiiTony Awards kulo nyaka ). Ingxaki kukuba, ayinguye wonke umntu onokubona Hamilton . Abalandeli be-Soundtrack-obsesses abangakwaziyo ukufika eNew York, abangaphumeleli iloto yamatikiti yemihla ngemihla, okanye abanakho nje ukufikelela kumaxabiso etikiti anyukayo bebekhwaza ngenguqulelo efakiweyo. Ngokudabukisayo, kuya kufuneka yilinde . Kodwa ubuncinci sifumana incasa yokuba kunokuba njani njengoLeslie Odom Jr. kunye nabanye abaphosayo basinika umbono womboniso kule vidiyo ikhethekileyo engama-360 ekhuthaza iiTony!
Eyona nto indothusayo kakhulu ngale vidiyo, ukongeza ekuziva ngathi ndikwindawo yemidlalo yeqonga nendlela enamandla ngayo ukulinda i-capella, yinto yokuba ilizwi lika-Odom livakala njalo umncinci . Ndiqhele isandi esivelisiweyo, kwaye kuloo nto uvakala emdala kakhulu. Ilizwi lakhe linzulu ngakumbi. Kule vidiyo, uvakala ngathi ulutsha ngakumbi, usesichengeni, kwaye ndikhala enye indlela yokuba kwindawo yemidlalo yeqonga naba bantu kwaye la mazwi ngamava anzulu kakhulu kunokuva nje umculo kwiSpotify, ndiyayithanda nangona ndenza njalo.
Kodwa kukwabonisa ukuba ukwenza umboniso bhanyabhanya kwintsebenzo ephilayo kuya kuguqula ubuncinci bamava ngendlela isandi esingasebenziyo. U-Lin-Manuel Miranda ubeka phambili ukufumana abantu abaninzi (kubandakanya abantwana besikolo abanokungabinawo amanye amathuba okubona umboniso onje) kwindawo yemidlalo yeqonga kangangoko, kwaye oko kuyaqondakala ngokupheleleyo. Ngaphezu koko, ndiyaqonda njengomdali ukuba isenzo sokuziqhelanisa yinkqubo ende, kwaye efuna uguqulo.
Oko kwathiwa, Hamilton sele sele efotelwe inzala, njenge ILayibrari kaRhulumente yaseNew York yoBugcisa boBugcisa kwiZiko laseLincoln Inogcino lwayo yonke imidlalo yeqonga kwiBroadway, Off-Broadway, nakwithiyetha yommandla. Ingqokelela ifumaneka kuphela ukujonga ngokuqeshwa kuphela, kwaye kuphela ngabafundi okanye ziingcali zemidlalo yeqonga ngeenjongo zophando, kodwa imiboniso iyonke ifotwe ngobuchule ukuze ibonwe ngaxa lithile kwangaphambi kokubaleka kwabo.
Uphi uChristina ricci ngoku
Ukuba abavelisi bacinge indlela yokwenza ukuba kufumaneke kwi-DVD / Blu-ray, okanye nge-iTunes, okanye nge-movie yeFathom kwilizwe lonke… masithi nje iinkwenkwezi, umdali kunye nabavelisi Hamilton unokufumana umrholo omkhulu ngakumbi oquka intsalela. Kananjalo, ngaphandle koloyiko olunokuba lukhona, ngokuqinisekileyo ngekhe kugcine nabani na ukuba akwazi ukuya kwindawo yemidlalo yeqonga ukuba angayi kubona umboniso bukhoma. Emva kwayo yonke loo nto, wonke umntu ufuna ukuba kwi igumbi apho kwenzeka khona .
Amabhaso eTony ngeCawa, nge-12 kaJuni nge-8PM EST kwi-CBS kunye ne-CBS All Access.
(nge IPajiba , umfanekiso nge-screencap)
Umdlalo Wasejapan Wokudlwengula
iinwele emfazweni inkwenkwezi iimfazwe
yeyiphi irobin eyabulawa ngumqhuli
Eddie murphy snl imvumi efihliweyo
Oovimba besini sethu
Iziphumo zobunzima 1 iinwele zamabhinqa
yenziwe ngantoni i-web